Snapdragon 855 နဲ့ Lenovo Z5 Pro GT ထွက်လာတော့မလား? | MyTech Myanmar
Snapdragon 855 နဲ့ Lenovo Z5 Pro GT ထွက်လာတော့မလား?
ပြီးခဲ့တဲ့လက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Lenovo Z5 ဖုန်း မိတ်ဆက်ပွဲမှာ နောက်ထပ် စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီစမတ်ဖုန်းလေးကတော့ Qualcomm ကနေ နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ Snapdragon 855 Octa-Core Processor နဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Lenovo Z5 Pro GT လေးပါပဲ။
မနှစ်က နိုဝင်ဘာလတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Lenovo Z5 Pro နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Chipset, RAM, Storage ပမာဏကလွဲရင် ကျန်တာက အကုန်တူတူပါပဲ။ အဲတုန်းကတည်းက Specs တွေ ပါလာမယ့် Features တွေ ဈေးနှုန်းတွေ ထွက်မယ့်ရက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုတော့ Geekbench မှာ အဲဒီဖုန်းလေးရဲ့ Benchmark ရလဒ်တွေ ပေါ်လာပါပြီ။
Geekbench မှာ Lenovo L78032 ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်နံပါတ်နဲ့ Lenovo Z5 Pro GT လေးကတော့ Snapdragon 855 SoC, RAM 6GB နဲ့ အမှတ်တွေ ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ Single Core ရမှတ်မှာ 3,284 မှတ်နဲ့ Multi-Core Test မှာ 10,237 မှတ်တောင် ရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရမှတ်က Prototype အနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ဖုန်းရဲ့ ရမှတ်သာဖြစ်တာမို့ တကယ့်ထွက်လာတဲ့ဖုန်းရဲ့ ရမှတ်နဲ့လည်း ကွာခြားရင် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆက်ပွဲတုန်းကလည်း AnTuTu Benchmark စာရင်းမှာ SD 855 နဲ့ Lenovo Z5 Pro လေးက 368,480 မှတ်နဲ့ ဦးဆောင်နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရမှတ်အရတော့ Z5 Pro GT လေးက Apple A12 Chipset သုံး iPhone တွေ Snapdragon 845 သုံး Android ဖုန်းတွေနဲ့ Kirin 980 သုံး Huawei ဖုန်းတွေထက်ကို ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Snapdragon 855 ကိုသုံးမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးမှာ RAM ပမာဏ 12GB ထိဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးတဲ့ ပမာဏပါ။ တကယ်လည်း မလိုအပ်ဘူးလို့တော့ ထင်ပေမယ့် သူကတော့ RAM 12GB, Storage 512GB နဲ့ လာမှာပါပဲ။
ကင်မရာကတော့ ကျောဘက်မှာ Sony IMX576 24MP Sensor+ Sony IMX519 16MP Sensor တွေကို သုံးထားပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတော့ 16MP+8MP Selfie Camera ကို သုံးပေးထားပါတယ်။
Base Model ကတော့ RAM 6GB, Storage 64GB ကို ယွမ် 2,698(~$391, မြန်မာငွေ ၆သိန်းဝန်းကျင်), RAM6GB+128GB ကို 2,998 ယွမ်(~$435, မြန်မာငွေ 6သိန်းခွဲကျော်) RAM 8GB+ 18GB Model ကို 3,998 ယွမ် (~579, မြန်မာငွေ ၉သိန်းနီးပါး) လောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး RAM 12GB + Storage 512GB မော်ဒယ်လ်ကိုတော့ 4,398 ယွမ် (~$638, မြန်မာငွေ ၁၀သိန်း နီးနီး) လောက်နဲ့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အခုလာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက်နေ့ကျရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တရားဝင် ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့လက တရုတျနိုငျငံမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Lenovo Z5 ဖုနျး မိတျဆကျပှဲမှာ နောကျထပျ စမတျဖုနျးတဈမြိုးကိုလညျး မိတျဆကျခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲဒီစမတျဖုနျးလေးကတော့ Qualcomm ကနေ နောကျဆုံးထုတျထားတဲ့ Snapdragon 855 Octa-Core Processor နဲ့ မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Lenovo Z5 Pro GT လေးပါပဲ။
မနှဈက နိုဝငျဘာလတုနျးက မိတျဆကျခဲ့တဲ့ Lenovo Z5 Pro နဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ Chipset, RAM, Storage ပမာဏကလှဲရငျ ကနျြတာက အကုနျတူတူပါပဲ။ အဲတုနျးကတညျးက Specs တှေ ပါလာမယျ့ Features တှေ ဈေးနှုနျးတှေ ထှကျမယျ့ရကျတှကေို ဖျောပွခဲ့ပွီးသားပါ။ အခုတော့ Geekbench မှာ အဲဒီဖုနျးလေးရဲ့ Benchmark ရလဒျတှေ ပျေါလာပါပွီ။
Geekbench မှာ Lenovo L78032 ဆိုတဲ့ မျောဒယျလျနံပါတျနဲ့ Lenovo Z5 Pro GT လေးကတော့ Snapdragon 855 SoC, RAM 6GB နဲ့ အမှတျတှေ ထှကျလာခဲ့ပါပွီ။ Single Core ရမှတျမှာ 3,284 မှတျနဲ့ Multi-core Test မှာ 10,237 မှတျတောငျ ရထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီရမှတျက Prototype အနနေဲ့ ပေးထားတဲ့ဖုနျးရဲ့ ရမှတျသာဖွဈတာမို့ တကယျ့ထှကျလာတဲ့ဖုနျးရဲ့ ရမှတျနဲ့လညျး ကှာခွားရငျ ကှာခွားနိုငျပါတယျ။
မိတျဆကျပှဲတုနျးကလညျး AnTuTu Benchmark စာရငျးမှာ SD 855 နဲ့ Lenovo Z5 Pro လေးက 368,480 မှတျနဲ့ ဦးဆောငျနကွေောငျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ရမှတျအရတော့ Z5 Pro GT လေးက Apple A12 Chipset သုံး iPhone တှေ Snapdragon 845 သုံး Android ဖုနျးတှနေဲ့ Kirin 980 သုံး Huawei ဖုနျးတှထေကျကို ရမှတျအမြားဆုံးနဲ့ ထိပျဆုံးက ဦးဆောငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
Snapdragon 855 ကိုသုံးမယျဆိုတာ ဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဖုနျးတဈလုံးမှာ RAM ပမာဏ 12GB ထိဆိုတာ ကွားတောငျမကွားဖူးတဲ့ ပမာဏပါ။ တကယျလညျး မလိုအပျဘူးလို့တော့ ထငျပမေယျ့ သူကတော့ RAM 12GB, Storage 512GB နဲ့ လာမှာပါပဲ။
ကငျမရာကတော့ ကြောဘကျမှာ Sony IMX576 24MP Sensor+ Sony IMX519 16MP Sensor တှကေို သုံးထားပါတယျ။ ရှဘေ့ကျမှာတော့ 16MP+8MP Selfie Camera ကို သုံးပေးထားပါတယျ။
Base Model ကတော့ RAM 6GB, Storage 64GB ကို ယှမျ 2,698(~$391, မွနျမာငှေ ၆သိနျးဝနျးကငျြ), RAM6GB+128GB ကို 2,998 ယှမျ(~$435, မွနျမာငှေ 6သိနျးခှဲကြျော) RAM 8GB+ 18GB Model ကို 3,998 ယှမျ (~579, မွနျမာငှေ ၉သိနျးနီးပါး) လောကျရှိမှာ ဖွဈပွီး နောကျဆုံး RAM 12GB + Storage 512GB မျောဒယျလျကိုတော့ 4,398 ယှမျ (~$638, မွနျမာငှေ ၁၀သိနျး နီးနီး) လောကျနဲ့ ထှကျရှိလာမှာဖွဈပွီး အခုလာမယျ့ ဇနျနဝါရီလ ၂၄ရကျနကေ့ရြငျတော့ တရုတျနိုငျငံမှာ တရားဝငျ ရောငျးခတြော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-01-11T00:14:07+06:30January 11th, 2019|Lenovo, Mobile Phones, News|